Exam Timetable MEXT 2018 Scholarship
(Research Students Program)
• Date : 9.6.2017 (Friday)
• Place : Embassy of Japan, No.(100), Natmauk Road, Bahan Township, Yangon
Phone : 01 - 549644
• Please come to the Embassy 30 mins prior to the examination.
• Please bring along National Identity Card.
MAJA Volunteer Class သင်တန်းများ 12.6.2017 ရက်နေ့တွင်စတင်ဖွင့်လှစ်မည်။
MAJAတွင် ပို့ချလျက်ရှိသည့်MAJAပညာဒါန သင်တန်းများ 12 .6.2017 တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ပို့ချပါမည်။
လျှောက်လွှာများကို 6.6.2017 ရက်နေ့မှ စတင်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
နေရာ - အခန်း 707 ၊7လွှာ ၊ အဆောင် C ၊ ပုလဲကွန်ဒို ၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း။
မှတ် ချက် ။ ။ ဂျပန် ဘာသာကို အ ခြေခံN5ံသင် ထားဖူးသူဖြစ် ရပါမယ် ။
အတန်းချိန် 75% ပြည့် မှီ သော ကျောင်းသား /သူ များအ နေဖြင့်MAJA နှင့်Japan Foundation တို့မှ ပူး ပေါင်းဖွင့် လှစ် ထား သော Japan Culture House (JCH) တွင် YUKATA ဝတ်စုံများ ၀တ်ဆင်၍ အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံ များရိုက်နိုင်သည့် အစီအစဉ် လေးလဲရှိပါတယ်.
visitors : 35,398